CODDAYN: Jamaahiirta Oo Doortay Xiddiga Ugu Fiican Premier League Xilli Ciyaareedkan Xilli Bruno, Kane & Gundogan Ay Kala Calaf-Qaadeen - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaCODDAYN: Jamaahiirta Oo Doortay Xiddiga Ugu Fiican Premier League Xilli Ciyaareedkan Xilli Bruno, Kane & Gundogan Ay Kala Calaf-Qaadeen
CODDAYN: Jamaahiirta Oo Doortay Xiddiga Ugu Fiican Premier League Xilli Ciyaareedkan Xilli Bruno, Kane & Gundogan Ay Kala Calaf-Qaadeen
Akhristayaasha shabakadda Daily Star ayaa doortay xiddiga ay u arkaan midka ugu wanaagsan horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan iyagoo kala saaray ciyaaryahano laga xusi karo Harry Kane, Ilkay Gundogan, Bruno Fernandes iyo Mason Mount.
Xiddiga ku guuleystay coddayntaas ayaa noqday kubad sameeyaha Manchester United ee Bruno Fernandes oo ay taageerayaashu u arkaan midka ugu wacan PL ilaa hadda xilli ciyaareedkan.
Bruno oo booska koowaad ka galay codka laga qaaday akhtisrayaasha Daily Star ayaa helay cod 31% ah halka khadka dhexe ee Man City ee Ilkay Gundogan oo isaguna xilli ciyaareedkan udub dhaxaad u ahaa Sky Blues uu booska 2-aad kusoo galay cod 17% ah.
Arrinta cajiibka ah ayaa ah in Mason Mount oo xulashadan loogu soo daray inuu yahay xiddiga Chelsea laga soo qaadan karayay uu booska 3-aad ku joogo 12% halka Harry Kane oo gool dhalinta iyo caawinta horyaalka labadaba hoggaaminayaa uu kaliya 9% kaalinta afraad ku galay.
Jack Grealish, Mohamed Salah, Declan Rice, Son Hueng Min iyo James Ward-Prowse ayaa kasoo muuqday inta kale ee liiska xiddigahaas.
Bruno Fernandes ayaa ahaa mid si joogto ah qaab ciyaareed fiican ugu soo bandhigayay Red Devils tan iyo markii uu dhinaca Sporting Lisbon kaga soo biiray sanadkii 2020 bishii January.
26 sano jirkaas ayaa xilli ciyaareedkan afar jeer ku guuleystay abaalmarinta xiddiga bisha ee Premier League isaga oo bar-bareeyay rekoodhkii abid ee abaalmarinahaas ee Cristiano Ronaldo.